पहिले गाडी रोके, अनि बडिगार्डलाई हाने, त्यसपछि न्यायाधीशलाई – MySansar
हरेक बिहीबार झैँ आज पनि सर्वोच्चका न्यायाधीश रणबहादुर बम कलंकीस्थित घरबाट ललितपुरको बगलामुखी दर्शन गरेर आफ्नो सेतो रङ्गको गाडीमा फर्कँदै थिए। उनीसँगै थिए उनका पारिवारिक साथी राम गिरी, कलाकार दीपकराज गिरीका पिता। पछाडिको सिटमा थिए उनीहरु दुई जना। अगाडिको सिटमा रहेछन् बडिगार्ड महेश गिरी र ड्राइभर अष्ट लामा। बा ८ च ९८५३ नम्बरको सेतो गाडी शंखमुलमा पुगेको मात्र के थियो, दुई जना चढेको पल्सर बाइकले गाडीको बाटो छेक्यो। किन रोकेको भनी बडिगार्ड महेश अगाडिको सिटबाट बाहिर के निस्केका थिए, बाइकमा रहेकाले दुई गोली हानेर उनलाई ढाले। त्यसपछि पछाडि सिटमा रहेका न्यायाधीश बमलाई झ्यालबाहिरैबाट गोलीहरु बर्साए। गोलीहरु नजिकै रहेका राम गिरीलाई पनि लाग्यो। गोली लागिसकेपछि न्यायाधीश बम एक सय मिटर जति गाडीबाट ओर्लेर भागेका थिए। तर उनलाई लखेटेरै थप गोली हानिएको थियो। बमको चिउँडो, घाँटीको रुद्रघण्टी, छातीका ३ ठाउँ, छाती नजिकैका कोखा र हातका औलाहरूसमेत गोली लागेको थियो। आखिर कसले गर्‍यो त हत्या?
अपराध बिटको समाचार लेख्‍ने साथी केपी ढुंगानाका अनुसार यो चानचुने मान्छेको काम हुनै सक्दैन। उनीहरु पूरै प्रोफेसनल सुटर हुन्। तर्साउनलाई हैन, मार्नैका लागि उनीहरुले गोली चलाएका हुन्। कारण भने प्रहरीले समेत पत्ता लगाउन सकेको छैन रे। भ्रष्टाचारीलाई सिध्याउँछौँ आदि इत्यादि नाम दिएर अमर नेपाल, नेपालवाद पार्टी लेखिएको पर्चा समेत त्यहाँ फालेर गएका भए पनि यो घटनालाई राजनीतिक रुप दिने प्रयासमात्रै भएको उनी बताउँछन्।
यस्तो खालको पार्टीको नाम पहिले कहिल्यै सुनिएको थिएन। लौ नयाँ पार्टी नै कसैले खोलेको भए पनि एकाएक यस्तो ठूलो अपराध गर्न सक्दैन। पर्चामा नेपाल आमालाई भ्रष्टाचारीहरुले ह्याँ वहाँ भन्दै ठूल्ठूला गफ छाँटिएको छ। कोहीकोहीले रिसमा भ्रष्ट, नेताहरुलाई त गोली ड्याङ् ड्याङ् हानेर मार्नुपर्ने भने पनि साँच्चिकै हातमा बन्दूक परे त्यस्ताले केही गर्नै सक्दैन। किनभने उनीहरु व्यवसायिक अपराधी नभई रिसमात्र पोख्ने हुन्। यो घटनामा त पूरै योजना बनाएर लागेको देखिन्छ। न्यायाधीश बमको दैनिकीलाई सूक्ष्म रुपमा नियालेर एकान्त ठाउँ रोजेरै गोली चलाएको देखिएको छ। न्यायाधीशसित त बडिगार्ड पनि हुन्छन् भन्ने पनि ती अपराधीलाई थाहा भएकै हुनुपर्छ। त्यसैले त सुरुमा बडिगार्डलाई निशाना बनाएर न्यायाधीशलाई हानेको देखिन्छ।
हुलियामा उनीहरु पुड्का-पुड्का मधेसी मूलका जस्ता भन्ने बयान आएको भनिएको छ। ती प्रोफेसनल सुटर हुन् भने उनीहरुलाई कसैले लगाएको हुनुपर्छ। कसले, किन, के उद्देश्य पूरा गर्न त्यसरी लगाएको होला, त्यो भने प्रहरीको अनुसन्धानपछि पक्कै खुल्ने नै छ। हामी अनुमान मात्र लगाउन सक्छौँ। संक्रमण कालको फाइदा उठाएर आतंक मच्चाउन त्यसो गरिएको होला। अथवा न्यायाधीश बमसँग कुनै व्यक्तिगत दुश्मनी भएकोले पो त्यसो गराएका हुन् कि ?
फेरि यी न्यायाधीश अलि विवादमा पनि परेका हुन्। न्यायपरिषद्ले कारबाहीका लागि सिफारिश गरेपछि उनको काम सर्वोच्चमा गएर हाजिर गर्नुमात्र थियो। उनलाई कुनै न्याय सम्पादनको काम दिइएको थिएन। विवाद डा भक्तमान श्रेष्ठको चर्चित अपहरण कान्डसँग पनि जोडिन्छ। भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका डा. श्रेष्ठका अपहरणकर्ताले अघिल्लो अपहरण र हातहतियार मुद्दाबाट छुट्न खर्च गरेको ७० लाख रुपैयाँ उठाउन उनलाई अपहरण गरेको बयान प्रहरीमा दिएका थिए। त्यो तथ्य सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको सक्रियतामा न्यायाधीशमाथि छानबिन प्रारम्भ भई न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश बलराम केसीको समितिबाट छानबिन गरायो। समितिको प्रतिवेदनले पाटन पुनरावेदनका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय उनी र हरिबहादुर बस्नेत तथा काठमाडौँका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीले त्रुटिपूर्ण निर्णय गरी अपहरणकारीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सर्वोच्चका स्थायी न्यायाधीश भइसकेका बमलाई कारबाही गर्न महाभियोग बिना अर्को कुनै उपाय नै थिएन। तर संसदले २०६७ सालदेखि पेन्डिङमा रहेको यो सिफारिशमा महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन।
केहीले भने सोझा बमलाई फसाइएको मात्र हो भन्ने गर्छन्। न्यायालयमा सबैजसो भ्रष्ट हुने गरेको र केहीले आफूलाई चोखो बनाउन उनलाई बलिको बोको बनाउन खोजेको उनीहरु बताउँछन्।
बडीको गार्ड गर्न सकेनन् बडिगार्डले
समाचारहरुमा नकाब लगाएर मोटरसाइकल चढिआएका दुई जनाले न्यायाधीश बम चढेको गाडीलाई रोकेको भनिएको छ। त्यसरी मोटरसाइकलले बाटो छेकेर गाडी रोकेपछि बडिगार्ड चनाखो हुनुपर्ने हो। खै, किन भएनन् ? प्रत्यक्षदर्शीहरुको बयानका आधारमा पुलिसले भने अनुसार त बडिगार्ड त्यसरी बाटो छेकेपछि किन छेकेको भनेर हेर्नलाई हो कि गाडीबाट झरेछन्। यत्तिकैमा अपराधीहरुले घाँटीमा लाग्ने गरी गोली हानिहालेछन्। बडिगार्डले आफ्नै बडीको गार्ड गर्न सकेनन् भने न्यायाधीशको कसरी गर्नु ? उनले त आफूसँग रहेको हतियार समेत चलाउन पाएनन्। उनले पेस्तोल निकाल्नुअघि नै उनी पेस्तोलको शिकार भइसकेका थिए। उनी ढलेपछि हत्याराहरुलाई झन् सजिलो भयो र पछाडिको सिटमा बसेकामाथि पनि गोली बर्साए। बमका साथी राम गिरी व्यर्थैमा गोलीको शिकार भए। ड्राइभरलाई भने केही भएन।
बडिगार्ड अगाडिको सिटमा बसेको भएर पो न्यायाधीशलाई बचाउन नसकिएको हो कि ? हैन, अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको हत्या हुँदा पनि उनका बडिगार्ड रोय केलरम्यान अगाडिको सिटमा नै थिए। बेलायती युवराज्ञी डायनाको कार दुर्घटनामा मृत्यु हुँदा पनि उनका बडिगार्ड अगाडिको सिटमा नै थिए। तर यो घटनामा आफ्नो गाडीलाई मोटरसाइकलले बाटो रोक्दा संभावित खतराको अनुमान बडिगार्डले लगाउन नसकेको देखिन्छ। यस्तै बडिगार्ड अरुको पनि छ भने उनीहरुको सुरक्षामा अब अर्कै ढंगले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।
पल्सर जति सबै शंकामा ?
हत्यारा पल्सर बाइकमा थियो भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै केही समयमा नै वरपरका सबै पल्सर चढ्नेहरु शंकाको घेरामा परिहाले। हाम्रै साथी सुशील भट्टराईलाई समेत सानेपामा पल्सर चढेकै कारण साँचो लिएर केही समय नियन्त्रणमा राखेछन्। उनले देखेका रहेछन्- कोही अस्पतालमा अक्सिजन पुर्‍याउन लागेको भन्दा समेत प्रहरीले जान नदिएर रोकेर राखेछन्। अपराधी अपराध गरेर कता पुगिसक्यो होला, प्रहरी भने पल्सरवालालाई समात्दै ठिक्क। यो दिउँसोको कुरा भयो। राति अबेर घर फर्कँदै गर्दा देखेँ- बाटोमा पुलिसले एक मोटरसाइकलवालाको जिउ खानतलासी गर्दै रहेछ। यसो नजिक
गएर हेरेको त- कालो पल्सर चढेको रहेछ! बजाजले लुटेरा र अपराधीले चढ्ने बाइक भनेर ठीकै विज्ञापन बनाएको रहेछ कि क्या हो?
3 thoughts on “पहिले गाडी रोके, अनि बडिगार्डलाई हाने, त्यसपछि न्यायाधीशलाई”
सल्मानखान जस्तो चतुर, बलिस्ट, इमान्दारी र सचेत बडीगार्ड भएको भए यो सब टर्ने थियो / ड्राइभरले पनि बडीगार्डमाथि प्रहार हुने बित्तिकै गाडीले पेली हाल्नुपर्ने थियो /
बडीगार्डहरूले सलमान खानको बडीगार्ड हेर्नु होला /
त्यो driver ले चै गाडी किन भगायेना. एउटा motorcycle लै त ढाल्नु पर्ने हो.
tilab kc says:
हे भगवान के हुने हो यो देशमा ,भगवानले मात्र बचाउन सक्लान यो देशलाई……otherwise …….nobody knows ….